တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် ဇွန်လ သိမှတ်စရာများ
✅တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် ဇွန်လ သိမှတ်စရာများ✅
မိုးဦးကျပြီဟုဆိုရမည်။ ယခုလက နယုန်လ။ ရှေးက နယုန်မိုးသေးမြက်သားမွေးလို့ ဆိုစကားရှိသည်။ မိုးလှိုင်ဦးမည် မဟုတ်သည်ကို ညွှန်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဇွန်လတစ်လလုံးမှာမှ မိုးနည်းပါးသည့်ဒေသများဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မှတ်တမ်းတွေအရ လေးလက်မအောက်သာ မိုးရွာတတ်သည်။ နေရာလိုက်၍ မိုးအနည်းအများတော့ ကွာခြားနိုင်သည်။မိုးဦးသီးနှံများကို မြေချစိုက်ပျိုးနိုင်မည့် ကာလဖြစ်သည်။ မိုးဦးယာသီးနှံများကို လျင်လျင်မြန်မြန် ပြီးစီးအောင်စိုက်ပျိုးရန် လိုပါသည်။
ယာသီးနှံဆိုတာ အပင်ခြေရေဝပ်ဒဏ်မခံနိုင်သည့်သီးနှံများကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ စပါးလို လယ်ကွက်ထဲ ရေသိုလှောင်စိုက်ပျိုး၍ မရပေ။ကန်သင်း မရှိသောယာမြေ၊ ကုန်းမြေလို မြေမျိုးမှာ စိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ နှမ်း၊ပြောင်း၊မြေပဲ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ဝါ၊ ငရုတ် စသည့် သီးနှံများ၏အမည်ကို ခြုံငုံ၍ ယာသီးနှံများဟု သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ယာသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရာတွင် ဂရုပြုသင့်သည်များကို အသိပေးလိုသည်။ ၁။ အပင်ပေါက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိသည့်မျိုးသန့်ကို အသုံးပြုစိုက်ပျိုးပါ။ ၂။ ခြောက်သွေ့မှုဒဏ် (Water Stress) ခံနိုင်ပြီး အပင်ပေါက် သန်စွမ်းကောင်းမွန်သည့် good seedling vigour မျိုးကို အသုံးပြုပါ။ ၃။ ရေမြေဒေသကိုက်ညီဖြစ်ထွန်းပြီး ဈေးကွက်ရှိသည့်မျိုးကို အသုံးပြုစိုက်ပျိုးပါ။ ၄။ အပင်ပေါက်ကောင်းနိုင်သည့်မြေအစိုဓာတ်ရရှိမှသာ စိုက်ပျိုးပါ။ မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းခြင်း မပြုလျှင်ပေါက်လာသောအပင်များသည်သေကုန်နိုင်သဖြင့် အထူးဂရုပြုစေလိုသည်။ အပင်ပေါက် ကောင်းမကောင်းနှင့် ပေါက်လာပါကလည်း အပင်များ၏ ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းမှုသည် မျိုးစေ့အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ယာသီးနှံများစိုက်ပျိုးအောင်မြင်ရန် ဒေသအချို့တွင် မိုးရွာသွန်းမှုသည် လိုအပ်သည့် ပုံမှန်မိုးရေချိန်ထက် လျော့နည်းနိုင်ပေရာ မိုးခေါင်ခံမျိုးဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
စိုက်နေကျမျိုးသည် မျိုးသစ်မျိုးဆန်းများထက် ဒေသရေမြေဖြစ်ထွန်းတာ သေချာသည်။ သို့သော် ဈေးကွက်မှာ မျိုးသန့်မျိုးစစ်ကိုမှ ကြိုက်သည်။ အထွက်ကောင်းရေးကအရေးတော့ကြီးသည်။ ဒေသဖြစ်ထွန်းပြီး ဈေးကွက်ရှိတာကို ဦးစားပေးရန်လိုသည်။ဒေသမဖြစ်ထွန်း၊ ဈေးကွက်မရှိလျှင် အထွက်ကောင်းသော်လည်း အကျိုးအမြတ်က နည်းနိုင်ပါသည်။ နှမ်းသီးနှံကို ဥပမာပြလိုသည်။ နှမ်းစေ့အရောင် အဖြူ၊ အနီ၊ အနက်မတူပါ။ ဈေးကွက်အကြိုက်မှာ တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်လည်းမတူပါ။ နှမ်းစေ့အရောင်ပေါ် မူတည်ပြီး ဈေးကောင်းရသည်။ စိုက်ပျိုးသည့်အခါ အနီမျိုးဈေးကောင်းရသည့်နှစ်တွင် အနီမျိုးကို ဦးစားပေးစိုက်ပျိုးသည်။အနက်က ဈေးကောင်းလျှင် အနက်မျိုး၊ အဖြူက ဈေးကောင်းရလျှင် အဖြူမျိုးကို ပို၍စိုက်လိုကြသည့်ဆန္ဒရှိကြောင်း သိရသည်။မည်သည့်နှမ်းမျိုးကိုပဲစိုက်စိုက် မျိုးသန့်သည့် နှမ်းနီစစ်စစ်၊ နှမ်းနက်စစ်စစ်၊ နှမ်းဖြူစစ်စစ်ကို စိုက်ပျိုးရန်လိုကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။
မိုးခေါင်သော်လည်း စိုက်ပျိုးသည့် သီးနှံအောင်မြင်ရန်လိုသည်။ မိုးမြေပဲနှင့် ပတ်သက်၍ မျိုးရွေးချယ်ရေး အကြံပေးလိုသည်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်နေသော ယနေ့အခြေအနေတွင် ရေငတ်ခံနိုင်သည့်မျိုး ဖြစ်သင့်သည်။ ဆင်းပဒေသာ-၆ နှင့် မကွေး-၁၁မြေပဲမျိုးတို့သည် စံထားရသော ရေငတ်ခံ မြေပဲမျိုးများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒေသအတွေ့အကြုံအရ ရေငတ်ခံသည့်မျိုးကို စိုက်ပျိုးကြစေလိုပါသည်။ မြေပဲတွင် ဖိုးလမင်းပိုးကောင်ကျရောက်ဖျက်ဆီးတတ်သည်။ ယခင်နှစ်ကကျရောက်ဖူးသောစိုက်ခင်းများတွင် ပို၍ သတိထားရမည်။ မြေပဲမျိုးစေ့ကို သင့်တော်ရာပိုးသတ်ဆေးရည်တွင် ရောမွှေခြင်း၊ စိုက်မြောင်းထဲသို့သင့်တော်ရာပိုးသတ်ဆေးထည့်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြေပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးရာတွင် မျိုးစေ့ကို ပဲမြစ်ဖုမြေသြဇာနှင့် လူးနယ်စိုက်ပျိုးစေလိုသည်။ မြေပဲပင်အတွက် နိုက်ထရိုဂျင် အာဟာရဓာတ်ရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းမြင့်မားသောယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာကို ဝယ်ယူသုံးစွဲရန် မလိုသဖြင့် အရင်းအနှီးလျော့နည်းစေသည်။ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းဖြင့်မြေပဲပင်အတွက် အကျိုးရလဒ်ကောင်းကို ရရှိစေပါသည်။
ပဲစင်းငုံကတော့ သီးနှံသဘာဝကိုယ်က မိုးခေါင်သီးနှံဖြစ်သည်။ အသက်ကြီးသည်။ အပင်ငယ်စဉ် ကြီးထွားမှုနှေးသည်။အစောပိုင်းကာလ အချိန်နှင့် နေရာကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချသောအားဖြင့် အခြားသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးနှင့် သီးညှပ်စိုက်သင့်ပါသည်။ ပဲစင်းငုံနှင့် နှမ်းလျင် (သို့မဟုတ်) ပဲစင်းငုံနှင့် ပဲတီစိမ်း (သို့မဟုတ်) သင့်တော်ရာ သီးနှံတစ်မျိုးမျိုးနှင့်သီးညှပ်ပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးစေလိုပါသည်။
➡️မြေဆီလွှာ ဖွံ့ဖြိုးရန် ပဲပုပ်သီးနှံ⬅️
ရှမ်းပြည်နယ်ကဲ့သို့ ကုန်းမြင့်ဒေသများတွင် စပါးကို ဝမ်းစာရရန် စိုက်ပျိုးသည်။ပဲပုပ်သီးနှံကလည်း ဒေသအကြိုက်ဖြစ်သည်။ယေဘုယျအားဖြင့် ကုန်းမြင့်ဒေသများမှာ မြေဆီလွှာညံ့ဖျင်းကြသည်။ သီးနှံအထွက်မြင့်မားရန် လိုသည်။ ရေရှည်လည်းမြေဆီလွှာဖွံ့ဖြိုးရန် လိုသည်။ ပဲပုပ်က ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ယာစပါးနှင့်ပဲပုပ်ကို သီးညှပ်စိုက်ပျိုးရန် ပြောလိုသည်။ တစ်သီးစိုက်သည်ထက် နှစ်သီးက ဝင်ငွေပိုမည်။ ဒေသစားသုံးမှုအတွက် ဝမ်းစာစပါးရော၊ ပဲပုပ်ပါဖူလုံစေမည်။ တောင်သူတွေ ကျင့်သုံးမှုတော့ နည်းသေးသည်။ နည်းလမ်ကောင်းဖြစ်သဖြင့်ကုန်းမြင့်ယာစပါးနှင့် ပဲပုပ်ကို သီးညှပ် စိုက်ရန် ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ယာစပါးကယူသည့် မြေဆီသြဇာကို ပဲပုပ်က ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ရေရှည်မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းဖွံ့ဖြိုးစေသည့်နည်းလမ်းဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
မိုးဦးသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရာတွင် သီးနှံအလိုက် လိုအပ်သည့် မြေအစိုဓာတ်ရအောင်မိုးရွာသွန်းသည်နှင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထွန်ရေးပြုပြင်စိုက်ပျိုးစေလိုသည်။ “ယာမှာအသုတ် လယ်မှာအပုပ်”ဟု ရှေးက အဆိုရှိသည်။ လယ်ဆိုတာ လယ်စပါးကို ရည်ညွှန်းသည်။ တမန်းညက်ရုံမက “ပုပ်” ဆိုတာ မြေပေါ်ရှိ ယခင်သီးနှံရိုးပြတ်၊ အပင်အကြွင်းအကျန်နှင့် ပေါင်းမြက်တွေ မြေမှာဆွေးမြည့်အောင် အချိန်ယူထွန်ယက်ရန် ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ယာကတော့ ယာသီးနှံတွေကို ညွှန်းတာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်မိုးဦးကျသီးနှံတွေကို ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုပိုပြီး သတိထားလိုက်နာသင့်ပါသည်။ သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းသည် ရာသီနှင့်ကိုက်ညီအောင်စိုက်ပျိုးမှသာ သီးနှံအထွက်သေချာသည်။ ရာသီဥတုကြောင့် စိုက်ချိန်နောက်ကျနိုင်သလို ထွန်တာယက်တာအချိန်ယူလွန်းနေသဖြင့် ကိုယ့်ကြောင့်လည်း နောက်ကျနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ခပ်သုတ်သုတ်မြန်မြန်စိုက်ရန် ယာမှာအသုတ် ဟု အမှာစကားထားခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မိုးဦးသီးနှံများကို မိုးရွာသည်နှင့် အမြန်ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးစေလိုပါသည်။
မေလအတွင်း မိုးရွာသွန်းသောဒေသများတွင် မိုးဦးနှမ်းလျင်အပါအဝင် သီးနှံအချို့ကို စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့သောဒေသများ ရှိပေမည်။အပင်သားခွဲနောက်မကျရန် သတိပေးလိုသည်။ ပေါင်းမြက်ကို ငယ်စဉ်ကပင် နိုင်နင်းအောင် နှိမ်နင်းရန်လိုသည်။ နေရာလိုက်၍ မိုးကြီးရွာသွန်းမှုကြောင့် သီးနှံမပျက်စီးရန် လိုသည်။ အပင်ခြေရေမဝပ်ရေး၊ရေထုတ်မြောင်းများ ကောင်းစွာပြုလုပ်ထားသင့်သည်။ လိုအပ်သည့် မြေသြဇာကျွေးခြင်း အပါအဝင် ပြုစုဂရုစိုက်မှုလုပ်ငန်းများကို အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဆည်ရေသောက်ဒေသ မိုးစပါးအတွက် ဦးစွာပြောလိုသည်။ ၁။ဇွန်လလယ်တွင် ပျိုးထောင်ပါ။ ၂။ အပင်ပေါက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိသည့်မျိုးသန့်ကို အသုံးပြုစိုက်ပျိုးပါ။ ၃။ ရေမြေဒေသကိုက်ညီဖြစ်ထွန်းပြီး ဈေးကွက်ရှိသည့် အထွက်ကောင်းစပါးမျိုး(High Yieding Variety) ကို အသုံးပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။ မိုးများသည့်ဒေသ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းဒေသများနှင့် ကချင်ပြည်နယ် စသည့် မိုးစပါးကို ဇွန်လအတွင်း မိုးရေချိန်ရှစ်လက်မနှင့်အထက်ရရှိရန် မျှော်မှန်းနိုင်သည့် အချို့ဒေသများတွင် လည်း စပါးသီးနှံကို အချိန်မှန်တွင် စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ ဆည်ရေသောက်ဒေသများကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဇွန်လလယ်ထက် နောက်မကျစေဘဲ ပျိုးထောင်ရန်၊ အပင်ပေါက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိသည့် မျိုးသန့်ကို အသုံးပြုရန်နှင့် ရေမြေဒေသကိုက်ညီဖြစ်ထွန်းဈေးကွက်ရှိသည့် အထွက်ကောင်းမျိုး (HYV) သို့မဟုတ် ဒေသစပါးမျိုး (Local Variety) တို့ကိုအသုံးပြုရန်သင့်ပါကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။
- မြန်မာတောင်သူကြီးများ ဂျာနယ်
Wisarra prioritizes genuineness and adequacy.
Wi Sar Ra International Co., Ltd.
Bldg F/S/33, Shwe Padauk Yeikmon, Bayint Naung Road, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar.
01-538231, 01-500460, 01-507034
Hotline Email Us
©2020 Wi Sar Ra International Co., Ltd. All right reserved.